सन्दर्भ बिशेष | गणेश कार्कीको ब्लग
Posted on May 1, 2011 by नेपाली मुटु
अमेरिकाको सिकागो सहरमा मजदुहरुले आठ घण्टा काम र आठ घण्टा आरामको नारा सहित गरेको आन्दोलन सफल भएको दिनको सम्झनामा सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको मे १ तारिकमा मनाइने अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस आज नेपालमा पनि मनाईदैछ । ‘विश्वका मजदुर एक हौं’ भन्ने नाराका साथ आज १ सय २२ औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइएको हो ।
यसैको उपलक्ष्यमा सम्पुर्ण श्रमजिवीहरुलाई पानीफोटो.com को तर्फबाट हार्दिक शुभकामना ।
सयवटा मुसाको भन्दा एउटा सिंहको शासन चाहिन्छ
Posted on April 26, 2011 by नेपाली मुटु
एउटा जोक्स सुन्नु भएको छ ? एउटा नक्कली नोट छाप्ने मानिस रहेछ । उसले एकदिन झुक्किएर १५०० को सिंगो नोट छापेछ । अब शहरमा त थाहा पाइहाल्छन् गाउँमा गएर साट्नु प¥यो भनेर विकट गाउँमा पुगेछ । र, एउटा पसलमा साटिदिनु न है भनेर १५०० को नोट दिएको बदलामा के आएछ, थाहा छ ? पसलेले ७०० र ८०० को नोट दिएछ । त्यसपछि के भयो होला आफै सोच्नुहोस् । तर नेपालको राजनीति चै ठ्याक्कै यस्तै अवश्थामा आइपुगेको छ । एउटा श्रीपेच फाल्दा जनताले अरु २८ ओटा श्रीपेच पाएका छन् । जनतामा निराशा व्याप्त छ । कसैले भने जस्तो सयवटा मुसा भन्दा एउटा सिंहको शासन चाहने बेला भएको छ । जनतालाई सार्वभौम र शक्तिशाली भनिए पनि तिनै जनताको आवाजको सुनुवाई छैन । जनता यसो भन्छन् तर सुन्ने कसले ? आउँनुहोस्, हाम्रो समस्या हामी नै सुनौं र, छलफल गरौं ।
नेपालको लाकतान्त्रिक आन्दोलनमा हजारौंको बलिदानी, बेपत्ता एवं घाइतेहरुको संघर्षपुर्ण योगदान मार्फत श्रीपेचको अन्त्य गरिएको थियो । तर यसको मतलब एउटा श्रीपेच हटाएर २८ वटा श्रीपेच लगाउँनु भन्नु थिएन । रोग, भोक, शोक र अभावमा गुज्रिरहेका नेपालीलाई सिंगापुर अथवा स्विजरल्याण्डको आश्वासन भन्दा पनि कानुन र विधिको शासनमा चलेको नेपाल हेर्ने चाहना थियो । गरिखाने वर्गको उन्नती र समुन्नतीमा राज्यले सहयोगी भुमिका खेलेको, देशलाई तीव्रतर आर्थिक समृदितिर लगेको र स्थायी शान्ति र दरिलो कानुनको चाहना मात्र नेपाली जनताले देखेको सपना हो ।
कोही प्रधानमन्त्री बन्नु र नबन्नु जनताका लागि गौण कुरा हुन् र राष्ट्रिय अस्मिता रक्षा कुरामा होइन, व्यवहारमा उतार्नुपथ्र्यो जुन कुरामा हाम्रा नेताहरु असफल देखिए । रातो पासपोर्ट बेचेर, इमान्दार राष्ट्रसेवकलाई राजिनामा दिन बाध्य पारेर, दुई बर्षमा बनाउँछु भनेको संविधान जबरजस्त थपेको म्यादभित्र पनि नसकेर, ६ महिनामा टुंग्याउँने भनेको शान्ति प्रक्रियाहालसम्म अलपत्र पारेर नेताहरुले जनताका नाममा लुट र फुट बाहेक केहि दिएको देखिदैन ।
यो वा त्यो वहानामा म्यादभित्र संविधान बनाउँन नसक्ने नेताहरुले माफी माग्नुको सट्टा बकम्फुसे भाषणले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने देखिदैन । अकासिदो मुल्यवृद्धि, बढ्दो लोडसेडिङ र बिरलै पाइने तेलले देशलाई कतातिर लादैछ भन्नेबारे हाम्रा नेता किन सोच्दैनन् ? राजनीतिक समस्याको आलाप मात्रले जनताको भोको पेट भरिदैन । ओठमा हाँसो छाउँदैन । यस्तोमा जनताले विकल्प खोज्न सक्छन् । नेताहरुले समयमा नै ध्यान दिऊन् ।
संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरा उठिरहेका बेला तपाईको मनमा के विचार आइरहेको छ, हामीसँग साट्नुहोस् ।
Filed under: नोट अफ डिसेन्ट, सन्दर्भ बिशेष |	6 Comments »
सावधान घरमुली ! घरै नरहला !!
घरको अधिकतम प्रयोग गरेर ठालु पल्टेकाहरुलाई आज विश्वभर नै सचेत गराईदैछ । खासमा यो घर जसले आफुलाई घरमुली या संरक्षक भनेर दाबी गर्छ, उबाट नै दिनानुदिन बिग्रदो छ । घरको अलिकति पनि वास्ता नगरि खाली आफ्नो दुनो सोझ्याउँने मात्र दाउ हेर्दा घर यस्तो भएको भन्नेमा कुनै घरमुलीले बिरोध पनि गर्दैन । तर समर्थन जनाएर मात्र घर बनिदैन । यति याद राखौं, आफुले बिगारेको घर अर्कोले सच्याई दिदैन, बनाई दिदैन । जति सकिन्छ चाँडो घरको सुरक्षाका लागि सोच्ने बेला भएको छ । बेला बित्न नपाओस् । मैले मात्र यस्तो गरेको हो र ? अथवा म एउटाले गरेर के नै हुन्छ र ? भन्ने जस्ता बहाना बनाएर कोही पनि उम्कन पाउँदैन अब । यसलाई चेतावनी हो भनेर बुझे पनि गल्ति हुदैन । वास्तवमा यो अप्रत्यक्ष चेतावनी नै हो ।
घर भनेको आफु बस्ने र आफुले बनाएको मात्र होइन । पृथ्वी हामी सबै प्राणीको घर हो । तर हामी पृथ्वीलाई हामी मानवको मात्र ठान्छौ । या आफुलाई यसको मालिक या संरक्षक मान्छौ । खोइ हामीले मालिक भएपछि कर्तव्य पुरा गरेको ? दिनदिनै प्रदुषणले पृथ्वी खराब हुँदै जादैछ । यहाँको वातावरण प्रतिकुल बन्दैछ । प्राकृतिक सम्पदाहरु या त रित्तिदै छन् या त बिग्रेर सम्हाली सक्नु छैन । यसको दोष हाम्रो हो, हामी सबैलाई थाहा छ । तर गरिब देशले धनीलाई र धनी देशले गरिबलाई दोष बोकाइदैछ । यसले पक्कै पनि पृथ्वीको वातावरण सुधार्दैन । हिजोका जंगलहरु आज शहरमा परिणत भएका छन् । विकाशको चरमताले विनाश तिर जादैछ पृथ्वी, हाम्रो घर । भन्न मन लाग्छ, सावधान घरमुली घरै नरहला । आजै देखि खाली ठाउँहरुमा रुखहरु रोप्ने हो र हरियाली बढाउँने हो भने पनि यो प्रतिकुलतामा उल्लेखनिय कमि आउँनेछ । हाम्रो घर पृथ्वी पनि सुरक्षित हुनेछ ।
यसैले चेतना विस्तारका लागि अथवा सबैलाई उत्तरदायी बनाउँन पृथ्वी दिवस मनाईदैछ । यो पृथ्वी दिवस अमेरिकी सिनेटर गेलर्ड नेल्सनको अगुवाइमा सन् १९७० देखि हरेक वर्ष अप्रिल २२ मा पृथ्वी दिवस मनाउन सुरु गरिएको पृथ्वी दिवसको निरन्तरता हो । दुई वर्ष अघि संयुक्त राष्ट्रसंघले अप्रिल २२ लाई अन्तराष्ट्रिय पृथ्वी दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । सन् २०११ अन्तराष्ट्रिय वन वर्ष समेत रहेकाले यो वर्षको पृथ्वी दिवसलाई वन संरक्षण र हरियाली वृद्धिमा केन्द्रित गरिएको छ । यसैले यसपालीको पृथ्वी दिवसको नारा छ, हरियालीका लागि अरबौं प्रयास । आउँनुहोस् पृथ्वी हाम्रो घर रक्षाका लागि हरियाली बढाऔं । आजको दिनमा पृथ्वी आफ्नो घर प्रति समर्पण गर्दै एउटा मात्र भएपनि रुख रोपौं ।
एकपटक आफुलाई सोध्नुहोस् त, तपाईले कहिले रुख रोप्नु भएको छ ?
Filed under: सन्दर्भ बिशेष |	4 Comments »
नयाँ बर्ष २०६८ को शुभकामना
Posted on April 14, 2011 by नेपाली मुटु
पानीफोटोको तर्फबाट सम्पुर्ण शुभचिन्तक लगायत समस्त नेपालीहरुमा सुख, समृदि, सु स्वास्थ्य, अमनचैन तथा उत्तरोत्तर प्रगतीको कामना गर्दछु । २०६७ सालमा अपुर्ण रहेका सम्पुर्ण कार्यहरु पुरा होउन् । देशमा नयाँ संविधान र नयाँ प्रगतीको बाटो खुलोस् । हत्या, हिंसा, कुशासन, भ्रष्ट्राचार, कालाबजारी, तस्करी तथा सम्पुर्ण गैरकानुनी कार्यको जरै देखि विनाश होस् । नेपालको बारेमा नेपाल भित्रै दिनको उज्यालोमा निर्णय गर्ने साहस हाम्रा नेताहरुले प्राप्त गरुन् । सबैमा आत्मविश्वास कायम रहोस् । देशभित्रै नयाँ नयाँ रोजगारीका अवसरहरु प्राप्त होउन् । कुनै पनि नेपालीले विदेशीभुमीमा आफ्नो भविष्य खोज्नु नपरोस् । देश भित्रै सबैको उचित मुल्याकंन होस् । पुन नेपालीहरुको नयाँ बर्ष २०६८ को अवसरमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु । HAPPY NEW YEAR 2068 (भित्र राशिफल र calendar पनि हेर्नुहोला ।)
यस बर्ष चै यो पुरा होस् यो चाहना
पानीफोटोको इ क्यालेन्डर डाउनलोड गर्नुहोस् ।
Filed under: सन्दर्भ बिशेष |	1 Comment »
के म अन्ना हजारे भन्दा कम छु र ?
Posted on April 13, 2011 by नेपाली मुटु
“अन्ना हजारे एक्लैले तह लाउँन सक्छन् इन्डियामा भएको भष्ट्राचारलाई ।”
“गाली मात्रैले बदल्न सक्दैन देशलाई, नागरिकको चेतनाले बदल्छ देश । अन्ना हजारे त्यही चेतनाको भौतिक उपस्थिती हुन् ।”
“अन्ना हजारे हामी तिमीसँगै छौ ।”
“तिमी नयाँ इन्डियाका महात्मा गान्धी हौ ।”
“हजारे तिमी अघि लाग, हामी पछि पछि छौं ।”
फेसबुकमा भारतिय मित्रहरुले आफ्नो स्टाटसमा यस्ता धेरै तारिफ लेखे । ट्विटरमा ट्विट गरे । इन्टरनेटको ठुलो कोठामा हजारेले ठुलै प्रसिद्धी कमाए । त्यही तारिफको पुलमा नेपाली साथीहरुले पनि थप्न थाले ।
“नेपाललाई चाहिएको छ अन्ना हजारे ।”
“हजारे तिमी नेपाल पनि आउ ।”
“देशमा म एउटा हजारे खोजिरहेछु ।”
कसैले गीत शैलिमा त कसैले कवितामा । जस्ले जे जान्यो त्यही भाकामा अनि जहाँ मिल्यो त्यही तारिफका पुष्पगुच्छा तयार भए । अन्ना हजारे, हजारे अन्ना, अन्ना र हजारे विभिन्न नाममा । म आफु सोच्छु, के म अन्ना हजारे भन्दा कम छु र ?
एक पटक सोचौ त अन्ना हजारेले के गरे ? उनले कुनै चामत्कारिक कुरा गरेका होइनन् । क्षणभरमा देशलाई संसारकै नम्बर एक बनाउँने उपाय ल्याएका पनि होइनन् । उनले गरेको सामान्य कुरा हो । उनले असल नागरिक भएको जिम्मेवारी पुरा गरेका मात्र हुन् । शान्तपुर्वक देशमा व्याप्त कुसंस्कारको बिरोध मात्र न गरेका हुन् । देशमा कानुन बनाएर मात्र हुदैन, कसैलाई पनि अपराध गरेर जोगिन नपाउँने गरि कडा कानुन बनाउँनु पर्छ मात्र त भनेका हुन् । यी कुरा त्यती गा¥हो, अफ्ठ्यारो र गर्नै नसकिने कुरा हो त ? एक पटक ठंडा दिमागले सोच्नु होस् त । यो आग्रह सबैलाई हो । खास गरि हस्तक्षेपकारी भुमिकामा रहेका व्याक्तिहरुलाई हो, जो भएको दिमागको उपयोग गर्न चाहदैनन् तर पनि उच्च पदमा छन् ।
यति सामान्य कुरा गरे पनि किन अन्ना हजारे सबैका आदर्श बने ? प्रश्न जति सरल छ, जवाफ त्यती न सरल । हो, उनले सामान्य कुरा गरेका हुन् । यसो हो भने किन हामी पुन अन्ना हजारेलाई मात्र गुहारिरहेका छौ त ? अन्ना आउ, अन्ना दि गे्रट । अन्ना अनि अन्ना र फेरि अन्ना । उनको तारिफ मात्र गरेर उनले थालेको काम अगाडी बढ्ने हो र ? हामी भित्र पनि त त्यस्ता आग्रह, आक्रोश र प्रतिक्रिया जन्मन्छन् । वास्तवमा हामी हरेकमा हरेक सानाठुला कुरामा प्रतिक्रिया जन्मन्छन् । तर पनि हामी एकैछिनमा विचार बदल्छौ । हामी एकले गरेर के हुन्छ ? हाम्रो दिमागमा त्यही आउँछ । र, हामी सबै कुरा चुपचाप सहन्छौ । धेरै गरेको भनेको चिया पसलमा, फेसबुकमा या ट्विटरमा गनगन गर्छौ । अनि यसरी जन्मन्छन् त अरु हजारेहरु ? एक अन्ना कहाँ कहाँ मात्र पुगेर भ्याउँलान् र ।
हामी सहन्छौ, सहन्छौ अनि सहदा सहदा सबै कुरा बिग्रिसकेको हुन्छ । तब बिरोध गर्र्न हामी बन्दमा उत्रन्छौ । हाम्रो संस्कार नै यस्तै छ । तर हामीमा आएका आक्रोशहरु पोख्नलाई बन्द नै गर्न पर्दैन । र, कुनै बिशेष चाड नै पर्खनु पनि पर्दैन । प्रतिक्रिया भनेको टिका थापे जस्तो हो र, कात्र्तिकको विजयादशमी पर्खिनलाई ? सभ्य ढङ्गले जुनसुकै बेला हामी आफ्ना प्रतिक्रिया राख्न सक्छौ । मैले यसो भनिरहदा बन्दको विकल्पमा गरिने सभ्य आन्दोलन के हुन्छ भनेर कसैले प्रश्न सोध्न सक्छ । तर के हामी त्यती असभ्य छौ र मैले यसको उत्तर दिनु पर्छ ? यसैले सामान्य नागरिकले बोक्ने भावना बोकेर त्यसलाई शान्तिपुर्वक प्रतिक्रिया जनाउँनु भयो भने प्रमाणित हुन्छ, तपाई भित्र पनि छ अन्ना हजारेको जति तागत ।(kontera, sign up, hotel, blog, tourism)
म भित्र छ अन्ना हजारेको तागत । अन्नामा जे छ, उनमा जस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, हाम्रो मनमा पनि आउँछ । महगींले उनलाई पनि छुन्छ, हामीलाई पनि छुन्छ । विनाकारण सरकार ढलेको देख्दा तिनलाई जस्तो विचार आउँछ, हामीलाई पनि त्यस्तै विचार आउँछ । भ्रष्ट्राचारको बिरोध उनले गर्छन्, हामी पनि त गर्छौ । उनमा हामीमा भन्दा अलग त्यस्तो चामत्कारिक गुण केहि छैन । तरपनि उनी महान् छन् । अत हामी उनले गरेको काम किन गर्न सक्दैनौं ? यसैले सोचौं । आफैसँग भनौं । के म अन्ना हजारे भन्दा कम छु र ?
Filed under: सन्दर्भ बिशेष, समाचार विश्लेषण |	1 Comment »